ओली सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत निश्चित, अब संबिधान संसोधन लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्न कसैले रोक्न नसक्ने « Npnews
ओली सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत निश्चित, अब संबिधान संसोधन लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्न कसैले रोक्न नसक्ने
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) एक्लैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा १२१ सदस्यमा जितेको भए पनि सरकार पूर्ण हुँदा नहुँदै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिएको छ । प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट छानिने ११० गरेर २७५ जना सदस्य भएको प्रतिनिधि सभामा साधारण बहुमत पाउन १३८ सांसद भए पुग्छ भने दुईतिहाइ पुर्‍याउन १८४ पुग्नुपर्छ । एमालेले माओवादी केन्द्रको ५३ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेपछि १७४ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको थियो जुन दुईतिहाइका लागि करिब १० स्थान कम थियो । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पनि सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेसँगै १६ सांसद सरकारको पक्षमा थपिएर कुल १९० सिट भएको छ । यो सरकारले संविधान परिवर्तन गर्नेसमेत क्षमता राखेको छ । संघीय समाजवादी फोरमको मुख्य उद्देश्य संविधानमा आफूले चाहेअनुसारको परिवर्तन गराउनु हो, जुन अबको सरकारबाट संभव देखिन्छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले महत्त्व दिएर तीन कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । पोस्टका अनुसार कुल २७५ स्थानमा सरकार पक्षीय दलको १९० रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको ६३ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको १७ सिट छ । बाँकी पाँच जना स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेकामध्ये छक्कबहादुर लामा र दुर्गा पौडेल पनि सरकारको समर्थनमा छन् । बाँकी तीनजनामा डा. बाबुराम भट्टराई गोरखाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको एक्लो विजेता हुन । उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेर जिताएको हो । झापामा नेपाली कांग्रेसको उमेदवारलाई हराउन एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेर राजेन्द्र लिङदेनलाई जित्न सहयोग गरेको थियो । लिङ्देनको दलले भने सरकारसँग मिल्ने घोषणा गरेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक्ला विजेता प्रेम सुवालले पनि आफ्नो झुकाव देखाएका छैनन् ।
सरकारमा सहभागी हुने फोरमको निर्णयको समाचारलाई गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठमा सानो समाचार बनाएको छ । संघीय समाजवादी फोरमको मंगलवार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
चीनसँग सम्बन्ध बढाउन पाकिस्तानको सल्लाह
नेपाल भ्रमणमा आएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खाकान अब्बासीले नेपाललाई चीनसँग ’कनेक्टिभिटी’ बढाउन सुझाव दिएका छन् । नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा अब्बासीले सो सुझाव दिएका हुन् । पाकिस्तानले १५ सय किलोमिटर लामो राजमार्गबाट चीनसँग व्यापार गरिरहेको र अहिलेको प्रविधिले जहाँसुकै पनि बाटो र रेलमार्ग बनाउन संभव पनि भएको हुनाले नेपालले पनि चीनसँगको व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्ने अब्बासीको सल्लाह छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदको शपथ लिएपछि पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीले भारत तथा पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुधार्ने काममा पनि नेपालले मध्यस्थता गर्न सक्छ भनेर नेपालको महत्त्व देखाएर गएका छन् । नेपालमा संवैधानिक प्रजातन्त्रले जरो गाडिसकेको र अब यो देश विकासको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न तयार रहेको पनि अब्बासीले नागरिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल तथा द रिपब्लिकाका सम्पादक सुवास घिमिरेलाई बताएका छन् । दुवै पत्रिकाले यो अन्तर्वार्तालाई पहिलो पृष्ठमा समाचार बनाएर विचार पृष्ठमा अन्तर्वार्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अब्बासीको भ्रमणको समाचारलाई राजधानीले पनि प्रथम पृष्ठको मध्यभागमा तस्बिरसहित प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठको पुछारमा एक कोलम दिएको छ । त्यस्तै गोरखापत्रले पनि यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा मुख्य फोटो र मध्य भागमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
रहेनन् तेस्रो आयामी इन्द्रबहादुर राई
वरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको ९० वर्षको उमेरमा उनको निवास दार्जिलिङमा मंगलवार निधन भएको छ । साहित्यमा लम्बाइ, चौडाइ, मोटाइ र गहनता हुनुपर्ने मान्यता सहित बैरागी काइला तथा इश्वर बल्लभसँग मिलेर उने तेस्रो आयाम नामको साहित्यिक आन्दोलन थालेका थिए । त्यसपछि उनले लीला लेखनका नाममा अर्को प्रवृत्ति अँगालेका थिए । राईको निधनको समाचारलाई कान्तिपुरले उनको स्केच सहित मुख्य समाचार बनाएर राईको उचित सम्मान गरेको छ । यो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले एक कोलमको समाचार बनाएको छ भने नागरिकले दुई कोलममा एन्कर बनाएको छ । त्यस्तै राजधानीले प्रथम पृष्ठमा प्वाइन्टरमा राईको निधनको सूचना दिएर पृष्ठ ४ मा विस्तृत समाचार राखेको छ ।
कान्तिपुरको मुद्दा बृहत्तर इजलासमा
सर्वोच्च अदालतमा कान्तिपुर विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा हिजो प्रकाशक, निर्देशक, प्रधान सम्पादक तथा संवाददाताको बयान सकिएपछि अब यो मुद्दा बृहत्तर इजलासले हेर्ने निर्णय भएको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कान्तिपुरले बुझाएको लिखित जवाफमा अदालती पदको दुरुपयोग गरेर प्रधान न्यायाधीश पराजुलीबाटै अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख छ । अब यो मुद्दा पूर्ण अर्थात् तीन न्यायाधीशको इजलास वा बृहत्तपूर्ण अर्थात् पाँच वा त्यसभन्दा माथिका न्यायाधीशको इजलासले हेर्नेछ ।
कान्तिपुरको मुद्दा चलेको इजलासमा प्रेसलाई निषेध गरिएको थियो । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रेसलाई इजलासमा पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ । जानकारको भनाइ राख्दै कान्तिपुर लेख्छ, न्यायसम्पादन बन्द इजलासमा गरेर अदालतले प्रेसप्रति शाहीकालमा पनि नभएको अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
देउवाले कांग्रेस बनाउने कि बिगार्ने ? ः नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा विजयी हुनु कुनै नौलो नभएको कुराबाट लेख उठान गर्दै नागरिक दैनिकमा पुरुषोत्तम दाहाल लेख्छन् नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अहिले जति धेरै शेरबहादुर देउवा कहिल्यै आलोचित भएका थिएनन् । दाहाल लेख्छन् — गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ बाट बसाएको आत्मघाती खेलको विषवृक्ष र कृष्णप्रसाद र गणेशमानहरूले त्यसविरुद्ध तय गरेका आक्रामक तर असफल रणनीतिको योगफल नै आजको कांग्रेस हो ।
अब षडयन्त्र सकियो त ? : अन्नपूर्ण पोस्टमा डा. युवराज संग्रौला लेख्छन् — भारतले पश्चिमी शक्तिसँग निरपेक्ष एकताद्वारा होइन, चीनसँको सुरक्षा सन्तुलनका आधारमा नेपालसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नुपर्ने अबको बाध्यता हो । राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक क्षेत्रबाट पनि नेपाल उपनिवेश बन्नसक्ने संभावना इंगित गर्दै संग्रौला लेख्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित देशलाई जनताले जोगाउन सक्छन् । तर, आर्थिक उपनिवेश भएपछि नागरिक सबैभन्दा कमजोर हुन्छन् । नेपाल अहिले आर्थिक उपनिवेशको चंगुलमा फस्ने खतरामा छ । त्यसैले प्रत्येक नेपालीले जनताको नियन्त्रणमा रहने समाजवादको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको भ्रमण द्विपक्षीयमात्र नभएर बहुपक्षीय भएको तर्क नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमा गरेको छ । भारतले सार्क देशको शिखर सम्मेलन हुन नदिएर पाकिस्तानलाई यो क्षेत्रमा अलग्याउने कोसिस गरेको तर यसबाट भारत आफैँ पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिमा कमजोर देखिएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । साथै नयाँ पत्रिकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढेर गएको सन्दर्भमा आफ्नो विदेश नीति र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरत बढेको बताएको छ ।
नागरिक दैनिकले अब्बासीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण भनेको छ । अहिलेको भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक महत्त्व रहेको प्रष्ट भएको भन्दै नेपाल अब आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सक्रिय बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिकको ठहर छ ।
गोरखापत्रले नेपाल सरकारले चैत्र १ गते देखि २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन लिएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । यो निर्णयबाट करिब १० हजार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लाग्ने अनुमान गरिएको र यसले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गोरखापत्रको धारणा छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पश्चिम सेती आयोजना ‘होल्ड’ हुने खतरा बढेको तर्फ संकेत गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने हिमालय टाइम्सले विपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र आफ्नै भविष्यका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
कान्तिपुरले खाद्य संस्थानले जथाभावी कर्मचारी भर्ती गरेकोमा असन्तोष प्रकट गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने राजधानीले नेसनल ट्रेडिंग सहित अन्य बन्द सरकारी उद्योग संचालनमा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदम भनेर स्वागत गरेको छ ।